किन गरिन् सलमान खानसँग नृत्य गर्न अस्वीकार स्वस्तिमाले ? (भिडियो)
सिनेपाटी | प्रकाशित: 2074, माघ 26, शुक्रबार
बलिउड अभिनेता सलमान खान नेपाल आउने चर्चाले उनका फ्यानहरुमा एकप्रकारको तंरग नै पैदा गरेको छ । अगामी मार्चमा टुँडिखेलमा हुने सलमान खानको ‘दबङ दी टुर’मा सलमानसँगै बलिउडका केही चर्चित हस्तीहरू नेपाल आउदैँछन् । सोही कार्यक्रमको लागी नेपालका आयोजकले नेपाली नायिकाहरू प्रियंका कार्की, स्वस्तिमा खड्का र एलिशा राईलाई सलमानको सोमा उनीसँगै कोरसको रूपमा नृत्य गर्न अफर गरेको थियो । उक्त अफर यी अभिनेत्रीले अस्वीकार गरेका हुन् । तिन अभिनेत्री मध्य एक स्वस्तिमा खड्काले आयोजकले हेपाई व्यवहारले अफर गरेको बताएकी छिन् ।
उनी भन्छिन् 'विदेशी कलाकार नेपाल आउनु हाम्रो लागी खुसीको कुरा हो । म उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु । तर हामीलाई आयोजकले अफर गर्दा हेपाई तरिकाले अफर गरिएको थियो । एउटा नेपाली कलाकार भएर नेपालको कार्यक्रममा हिन्दी गीतमा नाच्न सायद मेरो नैतिकताले दिँदैन होला ।' उनी थप्छिन् ' सामाजिक कामको लागी भएको भए पारिश्रमिक नै नलिएर काम गर्थे होला । तर टिकट मंहगो छ । बलिउडका कलाकारलाई मोटो रकममा ल्याउनु भएको छ । अनि हामी नेपाली कलाकारलाई चाहिँ किन पारिश्रमिक नदिने ? ' हेपेर प्रस्ताव गरिएको कारण नै उनले अस्वीकार गरेको बताइन् । आयोजक कम्पनी ओडीसी इन्टरटेन्मेन्टले नेपाली कलाकारलाई हेपेको भन्दै उनले आक्रोससमेत व्यक्त गरिन् ।बुझिए अनुसार आयोजक ओडीसीले अभिनेत्रीहरूलाई एक लाख पारिश्रमिकमा नृत्य, ड्रेस र रिहर्सल समेत सकाउने प्रस्ताव गरेका थियो ।